पत्नीसहित मन्त्री बेपत्ता « Jana Aastha News Online
पत्नीसहित मन्त्री बेपत्ता
प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०७४, शुक्रबार १२:०६
एकजना मन्त्रीले पदीय मर्यादा कायम नराख्दा नेपालको फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको छ । ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत एक हप्ता चीनमा हल्लिएर नेपाल फर्किएका छन् । राज्यमन्त्रीलाई श्रीमतीसहित घुमाउने काम चीनकै गेजुवा कम्पनीले गरेको हो ।
गेजुवा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको विवादित कम्पनी हो । चाइना गेजुवा एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले नेपालको त्रिशूली तीन ‘ए’ आयोजनामा गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरेको भनी विवादमा आइरहेको छ । त्रिशूली तीन एको क्षमता वृद्धि गर्न यो कम्पनीले नेपाल सरकारलाई व्यापक दबाब दिएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले क्षमता वृद्धि गर्दा अर्बौं भ्रष्टाचार हुने अडान लिएपछि काम रोकिएको थियो । पौडेल हाल चीनका लागि राजदूत छन् । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा पनि यो कम्पनी विवादित बन्दै आएको छ । हाल यस कम्पनीले बूढीगण्डकी आयोजना आफूलाई दिन नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यही मेसोमा ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई चीनको सयर गराएको बुझिएको छ ।
उनको चीन भ्रमणको कुनै एजेण्डा थिएन । यसबारे ऊर्जा मन्त्रालयमा जनआस्थाले सम्पर्क गर्दा एक अधिकारीले यो नितान्त निजी भएको बताए । तर, आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्ने विवादित कम्पनीको खर्चमा विदेश घुम्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै जवाफ दिएनन् । नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा एक महिनादेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न प्रयास गर्नुुपर्छ । त्यो पनि अन्तिम समयसम्म चिनियाँ पक्षले भेट हुने नहुने टुंगो छैन भन्दै झुलाउने गर्छ । चीनबाट नेपाल भ्रमण आएको आउरे बाउरे जोसुकैले यहाँ आएपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिभन्दा तलका व्यक्तिसँग भेट गर्दैन । हुँदा–हुँदा केही महिनाअघि एउटा चिनियाँ पर्यटन कम्पनीले नेपालका उपराष्ट्रपतिसँग खाना खानेसम्मको विज्ञापन गरेको थियो ।
भेट गर्न व्यक्तिको प्रोफाइल के हो ? उसको सरकारसँग के सम्बन्ध छ ? ऊ कुन हैसियतको व्यक्ति हो ? जस्ता कुरा वास्तै नगरी भेट दिँदा हाम्रा नेताले आफ्नो पदीय मर्यादा त राखेनन् देशकै बेइज्जत गर्न पनि पछि परेका छैनन् ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हँुदा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री दीपक अमात्य चीन गएका थिए । मन्त्रीजस्तो व्यक्ति जाँदा बेइजिङस्थित दूतावासलाई जानकारी गराएनन् । चीन सरकारलाई पनि केही जानकारी थिएन । एउटा कार्यक्रममा राजदूत महेश मास्केसँग भेट हुँदा उनले आफू पूर्वएमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको पिएको हैसियतमा आएको बताएका थिए । डेढ वर्षअगाडि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइरहेको बेला आपूर्तिमन्त्री वाइसिएल अध्यक्ष गणेशमान पुन सुटुक्क बेइजिङ पुगे । उनले त्यहाँ एकजना जर्नेललाई मात्र भेट्न सके । उनले आफू नेपालको मन्त्री भएको र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि वार्ता गएको आएको भनेर खबर गर्दा चीनले पत्याएन ।
भारतले त हाम्रा मन्त्रीलाई हेपेकै थियो अब चीनले पनि पुछ्न छाडेको छ । त्यो पनि मन्त्रीहरूको आफ्नै कारणले । कसैले बोलाउँदैमा र बाटो खर्चका रूपमा कमिसन दिँदैमा दंग परेर हामफाल्न नहुने ? राज्यमन्त्री भगतलाई गेजुवा कम्पनीले बेइजिङलगायत थ्री गर्जेज परियोजनाको पनि अवलोकन भ्रमण गराएको छ । चीनमा रहँदा भगतले गेजुवाकै प्रमुखलाई समेत भेट्न पाएनन् । गेजुवाको दोस्रो तहको व्यक्तिले भोज खुवाएको बुझिएको छ । झण्डै एक साता चीनमा बिताएर गेजुवाले दिएको उपहार लिई भगत नेपाल फर्किएका छन् ।
बलात्कारमा हदम्याद नलगाउन निर्देशन
विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
भोटेबहालको आगलागीमा तीन करोडको क्षति
कमल थापाले पनि थुपारे एमालेमाथि दोष
आज १० जनामा संक्रमित, १६ जना निको
एमालेका एजेण्टले मतपत्र पट्याएपछि भरतपुरमा तनाव, मतगणना रोकियो
नेपालमा पनि ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’